Unzụta Unisex na-ewepu Isi Isi & Ọsụsọ Deodor Perfume Spray - Mbupu Na-akwụ ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Unisex na - ewepu Odor Isi na ọsụsọ Deodor Perfume Spray
$ 12.99 Ịgachi price $ 21.99
ụgbọ mmiri ndị si China Russian Federation
Unisex na - ewepu Odor Isi & Ọsụsọ Deodor Perfume Spray - China na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Akwụkwọ ikike Production: Yue makeup20160535
Nọmba Nlele: A56342
Emdị :dị: Antiperspirant
Mmetụta: Na-ewepụ Odor Isi, Na-adịgide Adịgide, Na-ewepụ Odido Akpa Aka
Adabara akpụkpọ: All akpụkpọ
Slogan: Fresh na ooh, Nkasi obi na obi ụtọ
Atụmatụ ngwaahịa: Nwere Hamamelis Virginiana dị ọhụrụ, ụdị ya doro anya ma dịkwa nro, ọhụụ zuru oke, adịghị ọcha, agbachapụrụ iji sachapụ ísìsì ahụ, ọsụsọ, jiri nwayọ hapụ ihe na-esi ísì ụtọ, ka ọ dịrị mma na isi ahụ, moisturizing, skin skin, gentle , ntụsara ahụ, Enweghị ụjọ ma ọ bụ nsogbu, chekwaa nsogbu na ịdị mma.
Ngwaọrụ: Mmiri, Aluminom Chlorohydrate, Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Mwepụta Akwụkwọ, Diazolidinyl Urea, Methylparaben
Otu esi eji:
Hichaa underarm akpụkpọ ahụ, jiri akwa nhicha kpoo ya, ma debe ya n'okpuru ogwe aka
Were mmiri uto dị ọcha ihe dịka 5 cm pụọ na akpụkpọ ahụ ma tinye ego kwesịrị ekwesị na akpụkpọ ahụ.
Jiri nwayọ ịhịa aka n'ahụ maka nkeji ole na ole iji nyere aka banye.
Dabere na 23 nyocha
очень понравилось. Mmekọahụ .омогает. agaghị ekwe omume. однозначно рекомендую к покупке Uche Ogbuagu
E bugara ngwongwo ahụ na Podolsk n'ime abalị iri anọ na asatọ. Sochie esoro. Juru nke ọma. Nkọwa kwekọrọ. Iwu maka oge nke abụọ Daalụ onye na-ere ere!
Ọ bịara na St. Petersburg ruo ụbọchị iri isii na otu. Enweghị m olileanya inweta ya ọzọ. Abalị Fotere Afọ Ọhụrụ bịara na Disemba 61. Isi ya na-atọ ụtọ, ọ naghị ereghachite.
Ọ dị mma nwere ezigbo isi
Ihe ịgba ahụ na-amasị m. Ihe ịgba na-egosi n'ụzọ zuru oke na -emepụta mmetụta nke ịdị ọhụrụ maka ụbọchị niile. Gba na-eme ka anụ ahụ na-eku ume. Enwere ike iji ya maka akụkụ ahụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ maka ụkwụ. Nwere ike ịgba na ụkwụ gị tupu ị tụfuo sneakers kachasị amasị gị. Ọ na-ewute naanị na ezughị, mana ejiri ya akụ na ụba! Ekwadoro m ịnwale!